NIN ETHIOPIAN AH OO QABA CUDURKA AIDS OO WARQAD DHIIGIISA UU MARIYEY U DIRAY BARAK OBAME | Toggaherer's Weblog
ERGO KA SOCOTA BEESHA CIIDAGALE OO U BAXADAY DEEGANADA AY KA DHACEEN SHAQAAQADU AWDAL IYO GABILEY
KULAN DHEX MARAY CABDILAHI DARAWAL IYO X/ARIMAHA DIBADA KULMIYE .
NIN ETHIOPIAN AH OO QABA CUDURKA AIDS OO WARQAD DHIIGIISA UU MARIYEY U DIRAY BARAK OBAME
Posted by: toggaherer on: March 2, 2009
Doha/Qatar 01 march 2009 (THN)
NIN ETHIOPIAN AH OO QABA CUDURKA HIV/AIDS OO WARQAD UU MARIYAY DHIIGIISA U DIRAY MADAXWAYNAHA CUSUB EE MARAYKANKA BARAK OBAMA.
Sida lagu soo qoray jariirad ka soo baxda dalkaasi Maraykanka ayaa nin ka soo jeeda dalkaasi Ethiopia oo qaxoonti ku ah dalka maraykanka qabana xanuunka HIV/AIDS, intuu dhiigiisa marmariyay warkaq ka dibna boosta u dhigay madaxwaynaha cusub ee dalkaasi maraykanka. Warkan ayaa u qornaa sedan.
Nin Ethiopian ah oo qaxoonti oo maskaxdiisuna aanay caadi ahayn (waalan) ayaa la xidhay isaga uu diraya warqad uu mariyay dhiigiisa oo leh viruska HIV/AIDS.
Sacad Badri Huseen, ayaa u sheegay dambibaadhayaasha in uu diray warqadaas isaga oo waliba raaciyay liinta boodharka ah ama duqada ah wax lagu shubay iyo boost kaadh iyo waliba sawir uu isagu leeyahay oo telephone namberkiisuna ku qoranyahay sawirka dhabarkiisa, isaga oo sida uu sheegay waxan oo dhan u sameeyay in uu ka helo madaxwaynaha kaadh uu ku yimaado qudbadiisii dhaarinta madaxwaynanimada Obama.
Sacad ayaa sheegay in uu inta uu makiinad ku jaray far ka mid ah farihiisa, ka dibna dhiigiisa ku tuujiyay lix index cards iyo waliba warqad uu ka jaray bug ka dibna uu ku qoray warqada afka xabashiga sidaasna uu ku dhigay boosta.
Sacad ayaa sida uu walaalkii Cabdicasiis na xaqiijiyay qaba xanuunkaas aynu soo sheegnay waxa uu shegay in ay waxan ku kaliftay isaga oo ka doonaya dawlada maraykanka in ay caawiyaan oo gacan caafimaad u fidiyaan. Ninka ka tirsan saraakiisha boosta uu dhigay oo lagu magacaabo Terry Cullivan, ayaa sheegay in ay warqadu ku socotay ciwaanka xafiiskii hore ee Obama iyo ciwaanka Sacad oo ah ka uu rajaynayay Sacad in uu jawaabta ku helo.
Xafiiskii uu u diray ayaa gabi ahaanba la joojiyay shaqooyinkii 29 December, mudo laba saacadood ah, ka dib markii ay arkeen warqadan bawdharka iyo wax yaabaha kale ka kooban. Ka dib waxa baadhay warqadii team ka hortaga waxyaalahan oo kale baadhana. Teamkaas ayaana xaqiijiyay in aanay bawdharku ahayn sun bal se yahay cabitaan borootiin ah mid ka samaysan. Sidoo kale laba warqadood oo ka yimi Sacad ayaa iyagana laga helay isla xafiiska 31 December. Mid ka mid ah sadexda waraaqood ayaa ku socotay nin lagu magacaabo “Emanuel” ninkaan oo sida ay aaminsanyihiin saraakiil dambi baadhayaal ahi ahaa Rahm Emanuel oo ah imika mareeyaha guud ee dhamaan shaqada guriga cad. Dhamaan warqadaha lagama helin haba yaraatee wax la xidhiidha kimikals ka halista ah.
Sacad ayaa waxa kale oo la ogyahay dambiyo kale oo laba ah oo uu ka galay dalka maraykanka. Sacad waxa uu dhashay sanadki 1981, waxaana uu qaxoonti ahaan ku soo galay cariga maraykanka sanadii 2006. Ninkan isaga ah ayaa bishii March ee isla sanadaa 2006 lagu xidhay isaga oo hadalo kicin ah iyo quraan uu gubayo ku xidhay dariiq wayn oo dad badani marayaan. Police ka ayaa waxa ay geeyiin xiligaas dhakhtarka maskaxda waanay ka leexiyeen in maxkamad la hor keeno.